I-Lorcaserin hydrochloride hemihydrate (856681-05-5)
(R) I-Lorcaserin hydrochloride (846589-98-8)
Wonke umntu ufuna umsebenzi obalaseleyo kunye nemfundo eya kubanceda ukuba bahambe kude. Nangona kunjalo, abantu abaninzi kufuneka bancame umsebenzi wabo kunye neenjongo zemfundo unyaka nonyaka. I-CMOAPI iyazi ukuba ibaluleke kangakanani imfundo efanelekileyo, yiyo loo nto sinceda ukufundisa abafundi bethu ngokufota kunye neemveliso zekhamera ngovavanyo kunye neengcebiso. Akunyanzelekanga ukuba uhlawule imali eninzi ngesixhobo sakho ukuba usebenzisa izixhobo zokuphononongwa esikunika zona apha.
Isikolo sethu seCMOAPI Scholarship kukukhuthaza esitsha ukuba sizazise. Yimali eyi- $ 2000 yokufunda eyenzelwe ukunceda abafundi bafezekise amaphupha abo emfundo nawomsebenzi. Esi sibonelelo sokufunda siya kunikwa umfundi omnye ngonyaka ukuze akwazi ukuhlawula iindleko zemfundo. Sijonge ukuliphinda kabini inani lemali yokufunda kunyaka olandelayo. I-CMOAPI Scholarship linyathelo elincinci elisuka kwicala lethu lokunceda umfundi aqhubeke amaphupha abo. Ukuba unomdla kwinkqubo yethu yezifundo kwaye ufuna ukuthatha inxaxheba kukhuphiswano, nceda ufunde lonke ulwazi olunikezwe ngezantsi ngononophelo.
·Eyamkelwe okanye okwangoku ehamba kwiikholeji evunyelwe i-full-graduate degree okanye i-graduate program e-United States.
·I-GPA encinci ye-3.0 (okanye ilinganayo).
·Kufuneka ubungqina bobhaliso kwizifundo zesidanga sokuqala okanye kwisidanga sokuqala.
·Bhala isincoko ngesihloko esithi "Yintoni uSiko ngokweSiko kunye noPhando lweSivumelwano?"
·Kufuneka uthumele isincoko sakho kuthi okanye ngaphambi komhla we-7 kuDisemba 2020.
·Ungathumela isincoko sakho (kwifomathi ye -MS yeLizwi kuphela) nge-imeyile ukuya [imeyile ikhuselwe]
·Ungalibali ukukhankanya igama lakho, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni kwisicelo sakho.
·Uyacelwa kwakhona ukuba ukhankanye iinkcukacha zakho zekholeji / eyunivesithi kwisicelo sakho.
·Isincoko kuphela esiya kuba sahlukileyo kwaye siyilo esiya kuqwalaselwa kukhuphiswano.
·Umntu ophumelele uya kuqhagamshelwa nge-imeyile kwaye kufuneka aphendule kwiintsuku ezi-5 ukuze wamkele umvuzo. Ukuba akukho mpendulo ifunyenweyo ngaphakathi kweli xesha, omnye umntu oza kuphumelela uya kukhethwa ukuze afumane ibhaso endaweni yoko.
·Kuphela zizincoko eziya kwamkelwa nangaphambi komhla omiselweyo ziya kuthathelwa ingqalelo kukhuphiswano.
·Izincoko ziya kugwetywa kwiiparamitha ezininzi. Ezinye zazo zezi: ubumbano, ubuchule bokuyila, ukucinga, ukuxabiseka kolwazi olunikiweyo, igrama kunye nesitayile njl.njl.
·Abaphumeleleyo bazakubhengezwa nge-15 kaDisemba, ngo-2020.
Umgaqo-nkqubo wethu wabucala:
Senza isiqinisekiso sokuba akukho lwazi lomntu buqu kwabelwana ngalo, kwaye lonke ulwazi lobuqu lugcinelwe ukusetyenziswa kwangaphakathi kuphela. Asiboneleli zinkcukacha zabafundi kubantu besithathu nangasiphi na isizathu, kodwa sinelungelo lokusebenzisa amanqaku angeniswe kuthi nangayiphi na indlela esinqwenela ngayo. Ukuba ungenisa inqaku kwi-CMOAPI, usinika onke amalungelo kumxholo, kubandakanya ubunini bomxholo lowo. Kuyinyani nokuba ukuhanjiswa kwakho kwamkelwe njengophumeleleyo okanye hayi. I-CMOAPI.com inelungelo lokusebenzisa wonke umsebenzi ongenisiweyo ukuze ipapashwe njengoko ibona kufanelekile kwaye apho ibonwa ifanelekile. Abaphumeleleyo baya kuqinisekiswa nje ukuba banike ubungqina bokubhaliswa kwiyunivesithi evunyiweyo, ekholejini okanye esikolweni. Oku kubandakanya umfanekiso we-ID yomfundi yangoku, ukuhanjiswa kwesikolo, ileta yobungqina, kunye nekopi yerhafu yokufunda. Ophumelele owesibini uya kukhethwa ukuba ophumeleleyo akanako ukubonelela obu bungqina.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., EBEKELWE IMALI
Akukho.27 sitrato saseKeyuan, iSithili soPhuculo lwezoQohloko, i-Shanghe County, isiXeko saseJinan, kwiPhondo leShandong
nceda uqhagamshelane ku [imeyile ikhuselwe]
© 2020 cmoapi.com. Onke amalungelo agciniwe. Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyenzayo: Asenzi mabango malunga neemveliso ezithengiswe kule webhusayithi. Akukho lwazi lubonelelweyo kule webhusayithi luye lwavavanywa yi-FDA okanye yi-MHRA. Naluphi na ulwazi olunikezwe kule webhusayithi lubonelelwa ngokolwazi lwethu kwaye ayijoliswanga ukubuyisela ingcebiso ngugqirha oqeqeshiweyo. Nawuphi na ubungqina okanye ukuphononongwa kwemveliso okunikezelwa ngabathengi bethu ayizizo izimvo ze-cmoapi.com kwaye akufuneki zithathwe njengezindululo okanye inyani.